U-Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. wamukela ngokufudumele amakhasimende aseRwanda ukuthi avakashele
U-Hebei Lihua Pharmaceutical uphendula ngenkuthalo inqubomgomo kazwelonke ye- "Belt and Road" futhi anweba ngamandla izimakethe zaphesheya kwe-Afrika. Ekuseni ngo-Ephreli 22, ikhasimende laseRwanda kabahizi leza enkampanini yethu lizovakashela futhi lixoxe ngezinto zokubambisana. Umphathi jikelele we ...
I-African Swine Fever Fever Prevention and Control Research Program, iChinese Academy Yezolimo Yezolimo (2018-2022)
I-2019 Nian 5 Yue 24- Ri, iChinese Academy of Agricultural Science research briefing imemezele "uhlelo lokucwaninga nokulawula izingulube zase-Afrika". Ngemuva kokuvela kobhadane lwe-swine fever e-Afrika, i-Chinese Academy of Agricultural Sciences t ...
I-125th China Import and Export Fair, i-Hebei Lihua Pharmaceutical Industry Co., Ltd. ibuye nomthwalo ogcwele!
2019 Nian 5 Yue 1 day -5 th, 125 th China Import and Export Fair ebibanjelwe eGuangzhou Pazhou Exhibition Center. Njengomcimbi wezohwebo wamazwe omhlaba, indawo ethunyelwa ngaphandle yalo mbukiso ifaka izindwangu nezingubo, imithwalo, amasiko nezemidlalo, ukudla, izinto zokwelashwa kanye naphakathi ...